असोज ३१, २०७५ रासस
पशुपतिनगर, ३१ : इलामको सूर्योदय नगरपालिका–१ स्थित जोगमाई खोलामा एक वृद्धको माछा मार्ने क्रममा मृत्यु भएको छ । माई जोगमाई वडा नम्बर १ निवासी डम्बरबहादुर राईको मृत्यु भएको हो ।
मङ्गलबार दिउँसो माछा मार्न खोलामा हिँडेरका ७२ वर्षीय वृद्ध राई घर नफर्किएपछि परिवारले गए रातिदेखि खोजी शुरु गरेका थिए । रातको समयमा खोज्दा कतै नभेटेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । मृतकका आफन्त र प्रहरीको टोलीले आज बिहानदेखि खोजी गर्दा सूर्योदय नगरपालिका–१ स्थित जोगमाई खोलामा मृतावस्थामा भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगरका प्रमुख हेमराज ओलीले बताउनुभयो ।
दैनिकजसो माछा मार्न खोलामा जाने राई माछा मार्ने क्रममा खोलामा चिप्लिएर लडेपछि डुबेर मृत्युको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । खोलामा मृतक राईको टोपी र माछाको जाल फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मृतक राईको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल इलाममा लगिएको छ ।
प्रकाशित : बुधबार, असोज ३१, २०७५१९:४१
नगरकोटबारे यी चार नगरले गरे यस्तो निर्णय
शिवमाया तुम्बाहाम्फे उपसभामुखमा निर्वाचित
पोखराका होटल डिसेम्बर ३० र ३१ का लागि ५० प्रतिशत प्याक भए ! भटाभट बुकिङ हुँदै !
निर्मला हत्या प्रकरण : निर्दोषलाई हत्यारा बनाएर प्रहरी उम्किन खोजेको भन्दै प्रदर्शन ,गृहमन्त्रीको राजिनामा मागियो !